Gaaffii fi Deebiin Gaazexeessaan Dábessá Wakjira Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Marroo waliin taasise. – Oromedia
Home » Oduu » Gaaffii fi Deebiin Gaazexeessaan Dábessá Wakjira Ajajaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Marroo waliin taasise.
Waan isin egaa turtan yaroo keenya fudhannee warra sagaleen dhaggeefachuu hin dandeenyaaf barreeffamatti jijjirree jirra share gochuun oromoo hunda qaqqabsiisaa! Gaaffii fi deebii #Gaazexeessaa #Dhaabasaa_Waaqjiraa fi #Ajajaa #WBO #Zoonii #Lixaa, #Jaal _Marroo waliin taasifame kan sagaleedhaan jiru barreeffamatti jijjiireen isiniif dhiheessee jira. Dubbisaa waliif daddabarsaa yaa ilmaan Oromoo.
#GAAZEXEESSAA: Hayyee #Jaal_Marroo, hedduu galatoomi, toora irratti argamtee, waan nuti si gaafannu deebisuuf dhihaachuu keetiif. Mee yeroo ammaa kana haalli walii galaa naannoo sana jiruu fi sochiin WBO maal akka fakkaatu nuuf ibsi mee.
#JAAL_MARROO: Hayyee isinis fayyaa ta’aa,baga jiraattanii. Haalli walii galaa naannoo kana jiruu,sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo, wanti jijjiirame tokkoyyuun hin jiru, kanuma duriitii,haala hamtuu keessa dabarree. Jeequmsa hedduu,hundee nu balleessuu nutti aggaammate sanarra dandamannee, hanqinoota nu mudatan suphachuun garuma kaleessa irbuu itti seenne bilisummaa saba Oromoo kanaaf jecha wareegamuma kafalamuufii gabrummaa bara dheeraa nurra turte kanatti xumura gochuufi waan nurraa eegamu akka waraanaatti dalagnu sana dalaguutti dha jirra. Yeroo dheeraa waan silaa duula diina irraas, hubannaa dhaba saba keenyaa qabsoo bara dhufaa dabraa, hiree wareegama ilmaan Oromootti ijjitii gochuu fi guduunfuu dadhabuu nu mudateeni dhalootni kun silaa ka durii irraa baratee, waan isaaf malu wareegama ofiif kafaletti xumura ofiisaa godhachuu qabu, ka bara dhufaa dabraa isa dabre irraa baratee ka miilanaa kanaa nu harkaa hin ba’u ni xumuranna jenneetu turree. Irra guddaa kuni diina keenya biraayyuu osoo hin taane, caalmaatti uummata keenya biraati. Rakkoo dabballoota afaan minya’anii “sabni kuni waan barbaadu argateeraa, qabsoon goolabamteettii, bilisummaan dhufeera” jechuunii hawaasni keenya karaa gabaabduu irraa silaa daandii dheeraa deemaa dhufee xumura itti godhachuuf obsa xiqqoo tokko dhabeetu kallattii gabaaduun gara bilisummaatti baana jechuuni dabuu mul’atte irraatii Waraanni Bilisummaa Oromoo gaaga’ama guddaa keessa seeneetu ture. Ammoo haa taatuu, ejjennoo warri qabu, ilmaan Oromoo waan barbaadan beekaniifi maaliif akka ala jiran beekanii qabsoo kana oolchuu irratti of dhidhimnee sanaan ammoo milkii hin argannee.
Wareegama silaa kafaluu hin malle bakka kaleessa bira dabarretti nu deebisuu guddaallee nu mudatus keessa dabarreerra. Haalli amma jiru gara to’achuutti ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo waraanaa, hidhannooti harkaa qabaa, lolachuudha danda’a, wareegamaafis of qopheessee, maaliif akka du’us nii beekaa, kana gidduutti baay’ee kan gaaga’ame hawaasa keenya nagaa hawaasa nagaa jaalatu, harka duwwaa jiru, hojjetatee jiraatutu dhumaatii hin malle irra gahee, hanga ammaallee ka jiru gama waraanaa caalaa, gama uummata keenyaati. Duuti, hidhaan, dararamni silaa baruma mootummaa hanga ammaa seenaa keessatti Itoophiyaa bulchan Oromoo irra gahe takkaa yoo wal bira qabnee ilaallee gahee hin beeknetu amma gahaa jira waggaa tokkootii asitti haala kanatu mudate. Kana dandamachuutti dha jirra, dandamannees jirra. Rakkoon gama hawaasaa jiru garuu ammayyuu duuti hawaasa siviil ta’e harka duwwaa jiru hin dhaabbanne. Wanni walii galaa egaa kallattii kamiinuu Oromiyaa keessa jiru kanadha fakkaata. Ajjeechaa hamaa uummata nagaa irra gahaa jirutu jira. Miidiyaan adda addaa kanallee akka yeroo kaaniitti gabaasuuttis hin jiru. Quunnamtiin hawaasummaa hedduunisi ugguramee ykn ukkamfameetu jira waan ta’eefii uummatni keenya dukkana hamtuu yeroo baay’ee ulfaattuu ta’e keessatti dha jireenya isaa geggeessaa jira. Wanni walii galaa jiru isa kana egaa.
#GAAZEXEESSAA: Gidduu kana #Abiyyi miidiyaatti dhihaatee, ” karaa keessumaa karaa Lixaa lola jiru to’achaa jirraa humna jiru, nagaas buusaa jirra ” waan jedhu dubbatee jira. Kanarratti yaada maalii qabdu isin?
#JAAL_MARROO: Kun egaa, amaluma agartee, yeroo dheeraafi miidiyaa adda addaa irratti atillee, anillee, uummatni keenyallee namni kaan jara kana dhaggeeffatu hedduunillee dhagahaa turee. Yeroo barbaadanitti ka’anii, “Waraanni Bilisummaa Oromoo, naannoo gadhiise, badee, bosonatti galchine, ariinee biyyaa baasne, torbee tokkotti harkaan qabannaa, Ji’a keessatti achi…” wanti kuni deddeebi’eetuma. Kunis waan sana irraa adda ta’e hin qabuu, Waraanni Bilisummaa Oromoo hawaasa isaa waliinii, wareegama qaalii kafalaa naannoo jiru irratti lola ittisaa, ittisa irra immoo darbee haleellaa gara rakkoo naannoo kana jirutti xumura itti gochuutti falmaa hadhooftuu dhaa geggeessaa jira. Inni kuni hawaasa keessaati silaa ka dhagahamuu qabuu.
Uummatni waan jiru ukkaamfameetu jiraaf malee silaa carraa argatee dubbatee, ka achi haasa’amu sanaa baay’ee kanarraa fagoo faallaa ta’uu namuu hubachuu ni danda’a ture. Ammoo nama faallaa kee dhaabbatee jiru tokko irraatii, akkuma #Titiisa irraa #Damma hin eegne, #Titiisni yoo #Gaaguratti galee, bifa kamiinuu, waggaa meeqa yoo eegde illee, gaaf tokko yoo deemtee baasuuf jette, waan #Raamma‘e argitaan alatti #Dammi hin argamu. Maal jennaan, uumamaan Dammeessuu hin danda’u. Kunisi nama faallaa kee dhaabbatu irraa yoomiyyuu taanaan, wanni ati dhageessu wannuma akkasiitii. Kana akkasumattiinin siif ibsaa jechuu dha.
#GAAZEXEESSAA: Waraanni Bilisummaa Oromoo, haala yeroo darbe karaa adda addaa diiguuf itti aggaammatame sana keessaa ba’ee dandamateeraa?
#JAAL_MARROO: Dandamannaa qofa osoo hin taanee, ofirraa qolachuu, qolatee ammoo lola mataa isaatiini qophii mataa isaatii ofirraa loluu, sadaraa irra danda’utti ce’eetu jira Waraanni Bilisummaa Oromoo. Diigumsi yeroo sanaa silaa, akkuman sila sii ibsuu yaaletti, gama diinaa qofaan hin turree, hubannaa dhabiisa, akkuman kaase sana, #carraa_bara_dhufaa_dabraa_sana, ka #Lij_Iyyaasuu irraa kaasee, bara #Xaaliyaaniiuummatni Oromoo lolee, #Xaaliyaaniin illee gaafa biyya gadhiisu, saba lakkoofsaan hedduu ta’e aangomsuu barbaadu, sana illee of jala dabarsuu irraa kaasee, hanga bara #Dargii, #Egaa_Salaaleen waan jedhe tokko qaba, “#Tafarii #Ilma #Bantii, #Of #Eeggadhu #Jarri #Si #Gantii!” jedhani akkatti egaa sirbaan nama gorsan tu turee.
Booddee ammoo “#Yaa #Tafarii #Ilma #Bantii, #Si #Marrachiisanii #Akka #Hoolaa #Dhaltii ? ” jedhee itti mammaake. Carraa achii nu darbee kaasee, bara mootummaa ce’umsaa, Addi Bilisummaa Oromoo waraana guddaa qabu, dandeettii loltoota muuxannoo akkasumasi beekkumsa, ogummaa qabani hedduu qabuu, carraa garuu biyya qabachuu dadhabuuni of jala dabarsuu, hanga dheengadda ammoo sana hundumaa irraa baratee, yeroo ammaa kanatti #Fincila #Diddaa #Gabrummaa garbummaatti xumura gochuu danda’u warraaqsa sabaa geggeessaa ture of harkaa baasetti, rakkoon akkasii dheertuu dheertuu dheertuu tu nu mudate jechuudha. Kana hundumaa dandamachuu, dandamachuu qofaa mitii, ammas deebinee wareegama biraa kafaluufi qabsoo biraa itti geggeessuu itti fufuufi qophii hundumaa dandeettii hundumaa fi ga’umsa hundumaan ofirraa qolachuu, qolachuurra illee darbee sagantaa mataa isaatiin socho’ee loluutti jiraa jechuudha Waraanni Bilisummaa Oromoo. Kanaaf, gaaffii ati na gaafatteef, deebbiin kiyyaa ,#Dandamannaa irra sadarkaa darbeeni humni Waraana Bilisummaa Oromoo, ka of #Itichee jiru siin jechuu barbaada.
#GAAZEXEESSAA: Akkuma ati kaaste, Waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa mootummaa Itiyoophiyaatti qawwee lafa kaa’anii galani yeroo ammaa bakka adda addaatti faca’anii, gargaarsa dhabanii, rakkina adda addaaf saaxilamanii jiru. Kana ilaalchisee waan jedhu qabdaa?
#JAAL_MARROO: Inni kun egaa, waanin jechuu danda’u hin qabuu, deebisneellee walitti mammaakuullee taati jaallanuma keenya kaleessaa sana akkanaan goyyomfaman malee, “#Hima #Didaanii, #Du’a #Hin #Didu!” Ka jedhantu waan isaan mudate natti fakkaata. Ani kanuman siin jedha.
#GAAZEXEESSAA: Gama kaaniin, rakkoo uummata Oromoo irra ga’aa jiruufi ga’aa ture walumaa galatti buqqisuudhaaf, sadarkaa sadarkaatti uummatnis haa ta’uu haayyotni maal hojjechuu qabu jettee dhaamta?
#JAAL_MARROO: Hayyee egaa, wannin jechuu barbaadu, #bara #dhufaa #dabraa, #carraa #arganne #hundumaa #keessatti #Ejjennoo silaa ganamaa qabaanne sana itti cichinee tu, #Haalli kamuu, #Raafamni kamuu, #Bubbeen kamuu yoo dhufee, #gowwummaa, #wallaalummaa siyaasaa, #Garraamummaa Oromooni yeroo hundumaa lolee lolee xumura irratti guduunfaa gochuu dadhabuu sana keessaa of baatanii, #Xumura #Itti #Godhamuu dha qabaa. Keessumaa namootni keenyi, #gara #diidaa jiran, silaa biyya #faranjii tti jiraatanii, biyya beekumsi, qaroominni akkasumas teekinoolojiin adda addaa guddinni adda addaa keessa jiru keessa jiraatanii, biyya sana keessa jiraachuu qofa osoo hin taane, guddinaa fi qaroominni biyyi sun qabaatte, siyaasaa fi dimokiraasiin biyyi sun keessa jirtu illee, waniin guddachuu dha qabani. Namni waa barbaadu tokko, waan xiqqoo tokkoon hin goyyomu. Polotikaal neefiitii akkanaa keessa hin seenu. Maaliifii, wanni yeroo darbe ta’e , dubbiin dhaaname, wareegama har’a itti kafalaa jirru, daa’imni kichuun dhiiga itti dhangalaasuu jirtu kanaan nu gaheeraa jechuu dha. Qabsoon burjaajii keessa akka seenu taasifameeraa jechuudha. Dubbachuu tu narra jiraafin dubbadhaa. #Malaa tu #jira #yoo #ta’e, #Qarqara #Hooquun #Malaa #Sana #Hin #Fayyisuu, mala’uudha qaba jechuudha.
Kanaafii, gama #Diyaasphooraa irraa tiin rakkoon akka kanaatiin argamee, wanni har’a silaa wareegamni kafaluu hin malle tti nu galche guddaanii hawaasa keenya keessaa ka’e ka jedhun qaba. Waan ta’eef, komii odoo hin taane, wallaalummaan gama kanaan bara baraan nurra jiru cabee keessaa bahuu tu nutti jira jechuun barbaada. Yeroo hundumaa Oromoon wiirtuu lafee dugdaa biyya Itiyophiyaa kanaa ta’ee osoo jiruu, waan isaa maluu fi kabajaa isaatii malu argachuu dadhabe. #Abbaa_Bunaa ta’ee osoo jiruu, #Qola_Bunaa #Dhuguutti jiraa jechuudha. Silaa kan isaa ka ta’e harkaa qabuu, harkatti qabateetiniini, qabeenyummaa, abbummaa sana mirkaneeffachuu dadhabuu irraa jechuu dha. Har’a Magaala ofii keessatti, #Akka #Saree #Bataskaana ykn #Masgiida qaaneffamee salphifamee ifatamaatitti jira jechuudha. Uummata akkasiiti harkaa qabna. Lolee lolee, diina ofii ari’eetu, irraa deebi’a. Diinni keenya garuu, lafa taakkuu tokko gaafa argate, #Alaabaa ofii, mallattoo ofii irra dhaabee tu nama gabbarsiisa. Siyaasa hangana wal caallee jechuudha warra nu gabroomfate waliin. Ilmaan ammaaf gama adda addaan qabsoo Oromoo kana gara dabarsanii, warraaqsa sabaa kolaasani, piroojektii konispaayirasii guddina yeroo ijoollummaa irraa kaasanii akkaataa itti Oromoo cabsan keessatti warra guddifame jechuu. Afaan Oromoo dubbatan malee. Kana tu yeroo hedduu beekaa ofiin jennaa, kana galagalchinee ilaaluu dadhabuu irraatii, ilmaan keenya yeroo hundumaa lafee cabsisiisaa, dhiiga dhangalaasisaa umurii kichuuni jireenya dhokatuu jirra.
Kanaaf,uummatni ala jiru, qaroominaa fi beekumsa biyya keessa jiraatuu qabaachuu danda’uu tu irra jiraa. Ofii walii sammuu qaroomuu tu irra jiraata. Dooktoora ta’ee garuu kallattii injiinara ta’ee ,kallattii Oromoon tokko qabsoon Bilisummaa sabaa kun irra adeemu akeekuu hin dandeenye hedduu tu jiraa jechuu dha. Dandeettiin keenyi saba keenyaaf hin taanee, yoomiifuu eenyuufuu ta’uu hin danda’u. Ammoo haala kamuu keessattuu ammoo kan ta’ii adda addaa mudate keessatti ammoo warri ejjennoo ofii qabaatee, cichoomina qabaatee, har’allee waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabachuuni,WBO bakka jirutti gargaaruuf nu bira dhaabbatuuf jiru, #Galata illee qabdu jechuu hin danda’u. Maal jennaan, nu hunduu galatni keenyi, yoo sabni kun bilisa bahee,nagaan bahee, nagaan galee ijaan argu ykn sanaaf wareegamu galatni. Eenyuyyuu eenyuun galateeffatu hin jiru #Dirqama dha qabnaa, #Mirgas ammoo ti.
#GAAZEXEESSAA: Isin waraana. Waraana taatanii mootummaa Itiyoophiyaa dura dhaabbattanii lolaati jirtanii, hawaasni sadarkaa adda addaarra jiru hoo yoo maal godhe humna isinii ta’uu danda’a?
#JAAL_MARROO: Hayyee fayyaa ta’i. Egaa yeroo hundumaa wannin jedhuu, Waraanni Bilisummaa Oromoo, #Dhiiga_namaa_dhangalaasuufi #Suusii yookaan #Araada hin qabu. Dhiiga isa dhangalaasuu warra dhufe dha ofirraa ittisuutti kun hundumti ta’e waan ta’eefii, aadaan biyya Itiyoophiyaa, impaayerittii kana keessatti aangoo barcuma siyaasaa karaa nagaan walii kennuun takkaa ta’ee hin beeku, hin jirusi , kana tu hin jiruufii warri qawween nu bulchu, qawween nu bitee, qawween biyya kana qabatee, yeroo hedduu wanni isaan odeessaniifi afaan isaanii irraa bahu tokko dubbatanii, lammataatti “qawween dhufnee, qabsa’aa qawween nu buusaa!” ka jedhan, gama adda addaatiin wanni isaan fidan hundumtiyyuu akka qawwee kaasnu nu taasise waan ta’eefi, Oromooni waraana jabeeffatuudha qaba. Yoo kana ta’uudhaa baatee, nagaan jiraatee, dhugumaan gama nagaan immoo aadaan biyyittii keessatti nagaatiin barcuma siyaasaa walii dabarsuu fi ka injifate saba ofii bulchuu danda’u jiraate ammoo, Oromooni #Kaaba siyaasaa isaa jabeeffatuu dha qaba. Kanuma wannin dhaamu. Yeroo hundumaa odeessinee, yeroo hundumaa iyyinee hiika hin qabu. Dubbannee dubbiin bara dheeraa dubbatamaa as gahe. Hojjennee keessaa haa baanu. #Jijjiiramatu jedhamee, bilisummaa tu dhufe jedhamee, waggaa tokko jijjiirama jedhamee fi bilisummaa jedhame asitti ilmaan Oromoo osoo hin hidhamin diida qe’ee isaaniirratti ijjeefaman bara hanga ammaa ijjeechaa waraanni mootummaa taasiseen wal bira qabdee yoo laaltee, lakkoofsi isaa hedduu. Takkaa tu nu hin mudannee jechuu.
Karaan nagaa suni, duraanuu hin turre. Jijjiiramni, ani dubbadheeraa, duraanuu hin jiru. Maaliif jennaan, ka #Miilli_ittii_cite, ka #Laamsha‘ee mana hidhaa keessatti diida bahee ijjeefame, ka mana hidhaa keessatti ijjeefame, fedhiin #Qeerroo kaleessaa daandii gubbaatti dhiigni dhangala’e hundumti isaatuu namoota #amma #aangoo irra jiran kana #mormuutiin turee jechuu dha. Warri kun hundi isaanii kaleessa, yeroo adda addaatti gaafatamanii, #warraaqsa kanatti #qoosaa_warra ture, “#kashlabboota” warra jechaa ture, “yoomiyyuu duubatti hin deebinu hin jilbeenfannu. Waan akkasiin Itiyoophiyaan hin diigamtu!” … maal warra jechaa ture jechuudha. Warruma kanatu aangootti dhufe malee, warruma kanatu achumatti wal jijjiire malee, dhaabni siyaasaa biyya bulchu sun bakkaa hin kaane, namootni waan sana gochaa turani achumaa achitti, naannoorraa naannootti, bakka jireenyaa itti tottolfatan malee, jijjiiramni hin turre. Namni hedduun amma “jijjiiramni kun gara fashaluutti deemaa” jedha. Jijjiiramichi waan fashale hin qabu. Durumaanuu hin turre waan ta’eef. #Wanni #Hin#Dhaabbanne #Hin #Jigu! Kanaafiyyuu Kaleessuma iyyuu jijjiiramni hin turre. Har’as hin jiru.
Qabsoon gidduutti daguu tiin dhaabbatee ture, gara deebi’ee warraaqsi kaleessa ka’e, #Oromoon #waan #isaa #falu #argachuuf qophii ta’uutu irra jiraa, hojiin immoo argisiisuutu irra jira. Waraanni Bilisummaa Oromoo yoomuu #waadaa isaa #hin_diigne, #hin_haallee, #duubatti #hin #deebine sanumatti jiraa jechuu dha. Uummatni Oromoo si kanumatti deebi’uu tu isa baasa. Yoo kana ta’uu baate, Naannoo irraa Naannoo tti, Gandarraa Gandatti, mana mana ofii keessatti #Rasaasaan_Waxalamee du’a. Kanumatu ammoo jiraa, kanumatus isa eeggataa jechuudha. Yeroo hedduu yoo dhageessa ta’ee, “#Obsa #Fixannee,#Obsa #Hin #Qabnu!” ka jedhu tu aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa ofiin jedhan irraa tii dhagahama. Obsi suni, obsi dhumate sunii, har’a hojiitti hiikamee ilmaan Oromoo #dhiigni #dhangala’aa jiraa jechuudha. Oromoon kana ofirratti ilaallachuu hin dandeenye, #yoomiyyuu #rakkoo #kana #keessaa #bahuu #hin #danda’u.
#DHAAMSI #KIYYA #KANUMA.
#GAAZEXEESSAA: Hayyee fayyaa ta’i. Egaa gaaffii fi deebii keenya har’aa xumuruudhaaf dhumarratti wanti jettu yoo jiraate?
#JAAL_MARROO: Hayyee fayyaa ta’i egaa atisi. Uummatni Oromoo wal malee hin qabuu, of malees hin qabuu, Waraanni Bilisummaa Oromoo s qabsoo ofirratti hirkannoo mataasaatii fi saba isaa irratti dha geggeessa waan ta’eefi, akkanumaa nu bira dhaabbadhaa, nu jajjabeessaa. Sabni biyya Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru sabni hedduun of ijaaraa jiru sabni hundumtiyyuu qophii qaba. Gaafa rakkoon dhalatte, sabni qophii hin qabne, yoomuu saba Oromoo ti. Qawwee harkaa qabnu kanaa, hin jibbinaa illee, hin tuffatinaa illee. Yoo illee waan tokko ta’uu dadhabee, boruu ittiin wal eeguuf, of eeguuf illee nu fayyada jechuun barbaada. Dubbiin furmaata ta’uu dideera. Hojiimatu nu baasa waan ta’eefii, dubbii dheeraan waan nuu godhu hin qabu. Warraaqsa kaleessaatti deebinee, qaanii gabrummaa keessa jirruu fi rakkoo siyaasaa fi waraanaa nu mudatee jiru kana keessaa bahuu qabnaan dhaamsuma kiyya. Kanuman qaba anis. Jaala kiyya fayyaa ta’i.
Previous: Mootummaan Abiy, ABO balleessuf Wayyaaneetti Deebi’e!
Next: Ibsa Ejjannoo Miseensota Konyaa ABO Victoria – Australi